Ingxoxo yokudluliselwa: Ngabe iManchester United ifinyelela esivumelwaneni neMandzukic? - ITELE RELAY
Accueil » SPORTS Ingxoxo yokudluliselwa: Ngabe iManchester United ifinyelela esivumelwaneni neMandzukic?
Ingxoxo yokudluliselwa: Ngabe iManchester United ifinyelela esivumelwaneni neMandzukic?
Amafasitela okudlulisela ku-le ligi ebaluleke kakhulu yaseYurophu avaliwe, kodwa akukazeephuze kakhulu ukulinda uJanuwari. Chofoza lapha ukubuka okudluliselwe kwakamuva futhi uhlale unolwazi mayelana nenhlebo engezansi ngezansi.
Ama-ejenti aphezulu we-10 aphezulu e-2020 | Ukubuyekezwa kokudlulisa kwaseYurophu
Isivumelwano phakathi kweManchester United neMandzukic
Imibiko ye-Tuttosport ukuthi iManchester United ifinyelele esivumelwaneni somlomo nomgadli weJuventus Mario Mandzukic ekusayinweni komgadli waseCroatia.
Umakadebona uxhunyaniswe ngokuqinile nokuthuthela ku-Old Trafford izinyanga ezimbalwa manje, kusuka kwikhawuntali yokudlulisa ehlobo. Ngemuva komnyakazo ongazange uvele, baguqula ukunaka kwabo kuJanuwari futhi kubukeka sengathi bathuthuke kakhulu.
UMandzukic kukholakala ukuthi wenqabile amakhilogremu ama-7 ayisigidi ngonyaka ku-Al-Rayyan eQatar ngokuthanda ukuhlala emiqhudelwaneni ehamba phambili yase-Europe. Uma isivumelwano sivumelekile, kuzoqinisekiswa iJanuwari 1er.
I-Rakitic, iMatic phakathi kwamatshe okuhloswe ngawo i-Inter Milan
I-Inter Milan izimisele ukuletha imvelo entsha ewindini lokudlulisa likaJanuwari, Imibiko yeCalciomercato .
Abakwa-Inter bacatshangelwa ukuthi badinga enye inketho ekushintsheni kwabo kwaphakathi nensimu, ikakhulukazi uma bafuna inselelo enkulu yeJuventus ngesihloko seSerie A. Ivan Rakitic et Nemanja Matic isazoba ngamatshe amabili abalulekile ekilabhu, ngokubheja kwangaphandle, ngokusho kombiko: USergej Milinkovic-Savic ].
Sandro Tonali kusolakala nokuthi uyingxenye yeqembu, kepha kusele izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba kuvulwe iwindi, kunikeza umbono wokuthi izingxenye eziningi ezinyakazayo zenzelwe uConte
IManchester City inentshisekelo ku-Ake
Abagadli bePremier League iManchester City bafuna ukuqasha inkanyezi yeBournemouth Nathan Ake ngesikhathi soguquko lwangoJanuwari, I-Manchester Evening News .
Leli dolobha kwesinye isikhathi liye lazabalaza ekuqaleni komkhankaso wePremier League, nezinkinga zalo zokuzivikela zibhekwa njengenye yezinkinga ezinkulu. Kodwa-ke, manje, uma bekwazi ukuheha umuntu onjenge-Ake kule kilabhu, lokhu kungaba wuphawu olukhulu lwenhloso yesihloko seLiverpool.
UDutch Ake, oneminyaka eyi-24, ubelokhu eyingxenye yamaCherries selokhu ebuyile. ku-2017, imvelaphi yayo iqala emuva eminyakeni eyisithupha e-Chelsea.
Uma iCity inesifiso esisemthethweni ekugudukeni kwalolu hlobo, kuzofanela lwenze ngokushesha.
- UJose Mourinho wenqabile ukubuyela ekuphathweni noLyon, umpetha weLigi 1, ibika i-CMR . Lowo owayengumphathi weManchester United ngabe wayazisa ikilabhu ukuthi inhloso yakhe yokuqala ukuthi abuyele kuPremier League njengoba ezame ukubuyisa amandla kulandela isigameko esidumazayo e-Old Trafford.
- UJuventus unesifiso sokuzama ukusayina. Kwesokunxele emuva kweChelsea Emerson kubikwa uCalciomercato . Iminyaka yomdlali we-25 ibhekwa njengenye yezinhloso eziphambili zabanqobi base-Italy abazama ukwakha amakhono abo ohlangothini lwesobunxele. Nokho, iChelsea yayingamnikeza isandiso senkontileka ukuze ihlakaze isalukazi.
Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3961946/transfer-talk-manchester-united-reach-mario-mandzukic-agreement
VdS: izinhlamvu eziqinile
I-Instagram kumodi yokuhlola yaqala ukufihla ukuthandwa ngaphansi kwemiyalezo - IMoscow 24 - VIDEO
Isiphulelo sikagesi esisha esisithandayo sisanda kweyela ku-248 $, irekhodi - BGR
Ukwehla kwesimo sokuphepha eMali: AbaseMalawi ngokuhlangana ngemuva kweFAMa